Abenzi base China mesh sihlalo mveliso kunye nabathengisi | KUMHO
Isitulo esijikelezayo embindini, iklasi elula elula ngaphandle kokuhlala); ukubuyela umva nge-Korea mesh upholstery, ngokulungelelanisa inkxaso ye-lumbar; I-3D armrest kunye ne-PU cap, phezulu & ezantsi, ekhohlo nasekunene, phambili nasemva; Ukuphakama (Phezulu) kwesihlalo sesiponji esixineneyo kunye nelaphu elenziweyo, kunye nokuhlala kwezihlalo; Indlela "Zhongtai" enendawo ezi-2 zokutshixa; Isiseko senayiloni esingama-340MM, Φ60MM DB caster, D100Y50 KSG iklasi 4 gaslift
Umbala wenayiloni Mnyama, Mhlophe
Enemingxuma: Ngwevu, Mnyama, Bomvu, Luhlaza, Luhlaza
Isiseko: Mnyama, Ngwevu
Ukuba lilungu lePalo Alto Design Group ngo-Okthobha u-1995 uChen wazuza amava olawulo kunye namava olawulo kwi-Palo kunye neFlextronics International. ibanjwe yiMunich, iJamani kunye neSan Francisco, e-USA, u-Chen wayiphucula imveliso kwishishini lemveli neqela lakhe.Ngombono wakhe "Isazisi seMveliso yeXabiso", u-Chen uncedisa amashishini kwimveliso evelisa imveliso kwakhona, achaze ulwalathiso lophuhliso lwemveliso, kunye nobungakanani bexabiso lentengiso. uphawu.
Kumashumi eminyaka adlulileyo, ngomoya ka "Uyilo olonwabileyo", uyilo lukaChen lwalugubungela iinkalo ezahlukeneyo kubandakanya ukubonakala kwekhompyuter, iimveliso zeFotoelectric, imveliso ye3C, iimveliso zasekhaya kunye nefenitshala. Ngo-Epreli ka-2006 nango-2007, u-Chen wamenywa ukuba athathe inxaxheba kwiMboniso yoYilo lweFenitshala yamazwe aphesheya eMilan. Umsebenzi omangalisayo ongapheliyo wase-Mainland China, HongKong naseTaiwan.
"Ukuphila ubomi" kuthetha ukuhlala kwaye wonwabele ubomi bakho endaweni yokuphila. I-China ikhula ngesantya esothusayo. Abantu abasazabalazeli ukuhlala njengangaphambili. Sinethemba lokuba nendawo yokusebenza efanelekileyo kwaye intofontofo. Ndizama ukuthi, ekuchazeni le fashoni, ishishini liphela kufanele ukuba lazi utyekelo, ukuvelisa iimveliso ezinokwenza abantu bazive beshushu.Le yinjongo sonke ekufuneka siyifumene.
Uyilo lwesitayile esincinci
Umgca osisityebi kunye nomtsalane we-veneer kwi-backrest ngokudibeneyo inegalelo kwimveliso enesibindi kunye nobuchwephesha.SIZ imfutshane kwaye ilula kodwa intsha kwaye inempilo
I-classic geometric aesthetics
I-backrest edibeneyo ibonisa ubuhle bokubaluleka. Amanqanaba e-aluminium armrest aphakamisa isitayile se-SIZ
Usihlalo weofisi emininzi
Ukusuka kwisibeleko ukuya kwi-lumbar, i-SIZ inika olona xhaso lubalaseleyo kumzimba womntu okwenza ukuba usebenze kolunye ulonwabo.
Inkqubo ye-Sychro evela eDonati (e-Italiya) ibonelela ngolungelelwaniso loxinzelelo kunye nokutshixa ukutshixa.
Ukwenza i-geometric aesthetics yesayensi kunye nefashoni, sinika "isitayile sobukhulu" kwisimo ngasinye kuzo zonke iinkcukacha kubukhoma. Ngomgca omfutshane nolula, sichaza umbono wobomi obumangalisayo.
Ukuphuculwa komgangatho wendawo yeofisi
Uyilo olunemisebenzi emininzi luxhasa imisebenzi kunye
unxibelelwano ngohlobo ngalunye, lube negalelo kwimpumelelo
kunye nendawo enempilo yeofisi.
Egqithileyo Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kweSihlalo seMesh esiSwivel -Ukuthengisa okuPhezulu okuPhezulu kweFenitshala yeCaster Mesh nguSihlalo weOfisi eneSliding Seating - GOODTONE
Okulandelayo: Usihlalo weOfisi
USihlalo weOfisi yasekhaya
Izitulo zeLumbar zeNkxaso yeKhaya
phakathi kwesihlalo seofisi
Izitulo Office OEM
Ilaphu nguSihlalo weofisi
Usihlalo weOfisi ye-Ergonomic